indleko zomatshini wokutya owongezelelweyo wase China
Amandla:55KW + 1.1KW + 2.2KW izigaba ezithathu
Umatshini wokudibanisa nokutya okufumaneka kwiintlanzi ngoomatshini abasetyenziselwa ukuvelisa izilwanyana zasekhaya ezongezelelweyo, (ukuntywila) Ukutya okuvela elunxwemeni kunye nokutya okuvela kwamanye amazwe.
Inkqubo yokupheka eyongezelelweyo, kuba ibangela inqanaba eliphezulu le-gelatinisation yama-starches, isiphumo sokondliwa ngokuqina kwamanzi. lo matshini wokudibanisa iintlanzi unokuvelisa u-'anokwandiswa’ izidlo ezityibilikayo kunye neepellets zokuntywila. Inkqubo ikwaphucula ukwahluka kwemveliso. Nangona kunjalo, Abapheki be-extrusion badla ngokuba bakhulu kakhulu kwaye bayabiza ukuthenga nokusebenza.
Amayeza anezithako ezinje ngesidlo seembotyi zesoya kunye nezinto eziziinkozo zinokwenziwa ngokutya ngakumbi, kwaye izakha-mzimba ngoko ziyafumaneka ngaphezulu. Izinto ezityayo emgangathweni zenziwa kusetyenziswa izinto ezingaphezulu kunye nezinto ezityiwayo ezinamanzi kakhulu ezinokuthi zenziwe nazo Abagxeki njengokuba. Ngamanye amaxesha, Ii-extruders zisetyenziselwa nje ukulungiselela izixhobo zokutya, njengokukhupha okomileyo kweembotyi zesoya.
Ngokusisiseko, umatshini wokudada wentlanzi yokutya edadayo ngumgqomo omde kunye nesikrexe ngaphakathi ngaphakathi eyilelwe ngokukodwa ukufaka umxube wokutya kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo lwomphunga.. Xa ukutya kuphuma kufayo emgqomeni womgqomo, ubambe umsi ujijitheka ngokukhawuleza, iipellets ezifudumeleyo ezifudumeleyo ziyanda, Kwaye kwaveliswa uxinano lwepellet engaphantsi komhlaba koomatshini bokuhambisa ukutya bezinto ezahlukeneyo, kwaye inokwenza ukutya okunezimpawu ezininzi ezahlukeneyo. Eyona ngxaki iphambili kukuba bayabiza ukuyithenga nokuyigcina, kwaye abenzi bokutya badlulisa eli xabiso ukondla abathengi.
Iimpawu zeFludder zokuFudusa zeFlothi:
1. Ukusebenza ngokulula kunye nokufakwa
2. Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi
3. Ukulawulwa kobushushu ngokuzenzekelayo
4. Umsebenzi oqhubekayo kunye nokuqina
5. Ifumaneka ekutyibilikeni nasekutyeni kokutya kweentlanzi.
6. Ixabiso lokukhuphisana
Ukusetyenziswa kunye nokuphakanyiswa koomatshini beFish Extrusion Machine
1.Ukuhluza isuntswana: Kuxhomekeka kwiimfuno ezahlukeneyo zokuvelisa iintlobo ngeentlobo zemilo yokutya kwiintlanzi ezikumgangatho ophezulu, Iimpawu, yasemanzini.
2.Crabs ezikhukhumalisa granules: Igranule iqinile kwaye ijikeleze, kunye nobubanzi be-cranes ezikhukulayo zinokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zakho.
3.Imveliso: Ukulungiselela ukuntywila okanye ukuntywila kweepellets zamanzi, sinakho ukubonelela abathengi bethu ngeendlela ezizodwa ezisebenzayo zokondla zasemanzini.
4.Ubunzima obulungileyo bokutya buya kugcina ukuzinza kwesondlo kwaye kulungile ukuthintela ungcoliseko lwamanzi.
5.Inokubulala iintsholongwane ukutya okondlayo, yenza ukutya kwe-pellet kube zizinhanha, Kulula ukufunxwa.
6.Iziphumo ezinomdla ziyabonakala.
Ulwazi lobuchwephesha boMatshini wokuThintela ukuFumaneka kweNtlanzi